Saung Luu – My name is Maung Ba Nyunt (Essay) | MoeMaKa Burmese News & Media
Saung Luu – My name is Maung Ba Nyunt (Essay)
ကျနော့်နာမည် မောင်ဘညွှန့် (၃)
ညနေ ညဘက် ဆင်နဲ့ကျားသစ်
စီးချင်းထိုးပွဲကြည့်ဖို့ ထွက်တဲ့သူလည်း ထွက်ရဲ့ ….။
ကြက်ဖကြီးကို ပိုက်လို့ …။
ဒါက ဒီလုိုရှိပါတယ် …။ မောင်ဘညွှန့်တုို့ဆီမှာ စာသမား ပေသမား တယ်ပေါများပါတယ် ..။ သတင်းစာတုိုက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဟုိုးတုန်းကဆုို လူတုိုင်း ကဗျာတပုဒ်၊ ရေးအားကောင်းတဲ့ မောင်တွေကတော့ နှစ်ပုဒ်စ သုံးပုဒ်စ ရေးကြပါတယ် ..။ ပြီး လက်ရွေးစင် ပြန်ထုတ်ပေါ့ ..။
တလမှာ တခါလောက်တော့ ထုတ်ကြပါတယ် …။ ဒါကလည်း သတင်းစာပြီးတဲ့အချိန် လတ်ရား လတ်ရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေး (တကယ်က သတင်းစာပြီးလည်း အားရပါဘူးဗျာ) တွေမှာပါ။ စီစဉ်သူတွေကတော့ အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး …။ ကဗျာဆရာ ခင်လွန်း (ဦး) – တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ (အဲ့အချိန် အဝေးရောက်နေပြီလားလဲ မသိတော့ဘူး)၊ ကဗျာဆရာ နေနေ (အဲ့အချိန်တုန်းကတော့ နေနေပဲ ..ခုတော့ နေသွင်၊ လက်ထောက်အယ်ဒီတာပေါက်စထင်တယ်။ ခုတော့ စာရေးဆရာတဖြစ်လဲပေါ့ …)၊ နောက် ကဗျာဆရာ ခင်ရင်မောင် (ကုိုစောကြီး …အမေရိကား)၊ အဲ့လူတွေပဲ ထင်ပါတယ်။
စစချင်းတော့ မောင်ဘညွှန့်က ကဗျာရေးတာ စာရေးတာ သိပ်ဝါသနာပါသေးတာမဟုတ်ဘူး …။ တနေ့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇုိုင်နာဖြစ်ရမယ်ဆုိုပြီး …(ခုတော့ တလွဲစီပဲ) … တောင်ခြစ် မြောက်ခြစ် .. တောင်ပက် မြောက်ပက် စိတ္တဇလုိုလုို ဘာလုိုလုို အရုပ်တွေ လက်တည့်စမ်းနေတဲ့ကာလပေ့ါ ..။ ဆေးတွေ .. ကဲန်းဗတ်စ်တွေ၊ စက္ကူတွေကတော့ အဲ့အချိန်က ပန်းချီဆရာ မောင်ညဏ်စုိုးဆီက အလကား သွားသွားမနေတဲ့ကာလပေါ့။
နောက်ပုိုင်းတော့ မောင်ဘညွှန့်လည်း ကဗျာရေးပါတယ် …။ အနုအရစ် ပုရစ်ဖူးလေးတွေကုို အားကျပြီး ပုရစ်ဖူးဆုိုတဲ့ ကလောင်နဲ့ပေါ့ ..။ ပထမဆုံး ကဗျာက ခေတ်ပြိုင် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်းမှာ စပါတာပါပဲဗျာ …။ တပုဒ် ၅၀၀ ရတဲ့အချိန်ပေါ့ …။ နောက်ပုိုင်း ပုရစ်ကလောင်နဲ့စာမူခ မှားပေးပြီးကတည်းကကုို အဲ့ကလောင်ကုို အမွေပြတ်စွန့်လွှတ်လုိုက်တာပဲ …။ ၅၀၀ နဲတာမှတ်လုို့ ..ဟဲဟဲ..။
နောက်တခု မောင်ဘညွှန့်တုို့ဆီမှာ အဲ့အချိန်က သတင်းစာတုိုက်ရော .. စတူဒီယုိုကောရှိတယ် ..။ စတူဒီယုိုက လူထုလက်ရုံးတဲ့ … (ခုတော့ လက်ပျဉ်းတော်ကျသွားပါပြီ) .. စတူဒီယုိုတာဝန်ခံတွေက ကုိုဝေယံ (အပေါ်မှာပြောခဲ့သလုိုပဲ ခု အမေရိကားမှာ သားကလေးတယောက်နဲ့ ဆူရှီရောင်းနေတဲ့သူ)၊ နောက် ကုိုသက်နုိုင် (ဦးအောင်စောဦးတူ .. သူလည်း ခု အမေရိကားမှာ ဇိမ်ကျနေလေရဲ့) …
အဲ့အချိန်က ဆင်နဲ့ကျားသစ် စီးချင်းထုိုးပွဲကြည့်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ကြက်ဖပုိုက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာ …။ မောင်ဘညွှန့်တုို့ကတော့ စီးချင်းထုိုးပွဲကြည့် တဲ့အဖွဲ့က ခရုိုနီလေးတွေပေါ့ …။ ကြက်ဖပုိုက်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ အံ့ကျော်ကြီးတုို့ လူမုိုက်တသုိုက်ပေါ့ …။
စီးချင်းထုိုးပွဲကြည့်တဲ့အဖွဲ့က ညနေဘက် လက်လျှောက်အပြန်ဆုို မျက်နှာရဲလေးတွေနဲ့ …။ ကြက်ဖပုိုက်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ပေါက်ပေါက်တွေဖောက်ပေါ့ …။
ဒီလူတွေလည်း ခုတော့ .. အမေရိကားတုို့ .. ဥရောပတုို့မှာ တုတ်ကောက်ကုိုင် လမ်းလျှောက်နေကြပြီထင်ပါတယ်။
မှတ်မိကောင်း မှတ်မိကြမယ်ဗျာ …
ကြောင်းဆိုး ကြောင်မိုက် ကြောင်တသိုက်နဲ့
အကြိမ်ကြိမ် အိပ်ပျက်ရ ညတွေကြောင့်
မောင်ဘညွှန့်တုို့ဆီမှာ ကြောင်တွေပေါတယ် …။ ကြောင်သခင်ကတော့ ဦးအောင်ဖုန်းမြင့် (သူက ပီဒီအက်ဖ် – ဗုိုလ်မှူးကြီး စိန်မြ (မှန်လားတော့ မသိဘူး) သူ့တပ်ကပြောတာပဲ .. အထဲတုန်းကတော့ လေတပ်ကနေ တောခုိုလာတဲ့သူလုို့ဆုိုတယ် …။ ခုတော့ အမေရိကန်မှာ ခုိုနေလေရဲ့) …။
သူက လူတုိုင်းနဲ့သော သိပ်မတည့်ဘူး .. လူတွေက မတည့်တာလား ..သူကမတည့်တာလားတော့ မသိဘူး..။ မောင်ဘညွှန့်နဲ့ကတော့ လေပေးဖြောင့်တယ်ပြောရမယ် ..။ စိတ်ကောင်းရှိကြပါတယ်။ နောက် ဟင်းချက်လည်းကောင်းတယ်။ သူဟင်းချက်တဲ့နေ့ဆုို စားကောင်းတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာ ..။ မောင်ဘညွှန့်နဲ့လေပေးဖြောင့်တယ်ဆုိုတဲ့အတုိုင်းပဲ .. ငါးဟင်းတွေ ဘာတွေချက်တယ်ဆုိုရင် ..ငါးဟင်းမစားတဲ့ (ဂျီးများချက်က) မောင်ဘညွှန့်တုို့အတွက် တခုသပ်သပ် စီမံပေးသဗျ …။
နောက် ထမင်းလေး ဘာလေးစားပြီးလုို့ကတော့ သူ့ဆီမှာ အချိုတည်းဖုို့ ထန်းလျက်ကလေးကအစ ရတယ်။ နောက် ဆေးလိပ်သောက်ချင်လည်း ရတယ် ..။ မနက်ဆုိုလည်း ကော်ဖီမစ်လေးကအစ သူ့ဆီကရတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် လေပေးဖြောင့်ဖုို့တော့ လုိုတယ် … ။ မဟုတ်လုို့ကတော့ …။
နောက်တခု သူမွေးထားတဲ့ ကြောင်တွေ သွားထိမရဘူး ..။ ရန်သူဖြစ်ကုန်မယ် …။ မောင်ဘညွှန့်ကတော့ ကြောင်ကလေးတွေကုို ချစ်ပြရတာပေါ့ …။ (နောက်ပုိုင်းတော့ မောင်ဘညွှန့်နဲ့ သူနဲ့ သဘောထားအကြီးအကျယ်ကွဲလွဲခဲ့ဖူးတယ် ..။ လျှို့ဝှက်ချက်တခု ပေါက်ကြားသွားတာကြောင့်ပေါ့ဗျာ) …။
ကြောင်တွေက အားလုံး ၁၀ ကောင်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ် ..။ ဆုိုးချက်ဗျာ …။ နေ့လည်နေ့ခင်းဆုို မအိပ်ကြဘူး …။ ညသန်းခေါင်မှ ထထကမြင်းကြတာ …။ ဒါပေမယ့် တမျိုးတော့ကောင်းတယ် ..အယ်ချုပ်ကြီးလည်း ကြောင်တွေ ကမြင်းလုို့နဲ့တူတယ် ..ဘိပြောင်းသွားတယ် ..။ မောင်ဘညွှန့်တုို့အတွက်တော့ အကြိုက်ပေါ့ ..။ သုို့ပေမယ့် ဒီကောင်တွေ နှိမ်နင်းဖုို့ကြံရတယ် …။ မောင်ဘညွှန့်တုို့ ၀ုိုင်းနားလာရင် ၂ ဖုံးလောက် ကောက်တုိုက်လုိုက်တယ် …။ ခွီးခွီးနဲ့ သကောင့်သား .. ငြိမ်ပြီး ဇိမ်ခံနေတယ် …။ ဦးဆောင်သူ ဆရာကြီးတွေကတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ကြက်ဖပုိုက်တဲ့ အံ့ကျော်တုို့တသုိုက်ပေါ့ ..။
နောက်ပုိုင်းတော့ဗျာ …. အမောင်ကြောင်တုို့ကုို တပတ်ခြား ..ဒါမှမဟုတ် … သုံးလေးရက်ခြားလောက် တခါ တောထွက်ခုိုင်းလုိုက်ရတယ် …။ သနားတော့ သနားပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် ၀ါးလုိုက်ကြတာပါပဲ …။
ကြောင်ဆုိုတဲ့ကောင်က တော်တော်အသက်ပြင်းတယ် …။ တောတောင် မထွက်ချင် ထွက်ချင်နဲ့ထွက်တယ် …။ ပုိုင်ရှင်သခင် ဦးဖုန်းကတော့ သူ့ကောင်ကြီးတွေ တောထွက်သွားပြီပေါ့ …။ ဒါပေမယ့် မောင်ညဏ် (ကုိုညဏ်လင်းထွန်း – ဦးပီတာလင်းပင်နဲ့ အမျိုးတော်စပ်သလုို မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဆုိုတော့ မိန်းမသိပ်ကြိုက် …။ ခုတော့ အမေရိကားမှာ ထမင်းဆုိုင်လား ..ဟင်းဆုိုင်လားဖွင့်ပြီး … ညညဆုို ဖေ့ဘုတ်ခ်ပေါ်တက်ပြီး တ,နေလေရဲ့) လက်ပေါ်က ကြောင်ကုတ်ရာကြီး ကြည့်ပြီး … သက်ပြင်းတွေ ချနေတာ တွေ့မိသေးတယ် …။ နှစ်ယောက်စလုံး အမေရိကားမှာ ဆုံပြီး မရှင်းလောက်ဘူးထင်တယ်ပါတယ်။ ဟုိုမှာက လက်နက်တွေ သိပ်ပေါတော့ ပြောလုို့တော့မရဘူး …။
လွမ်းရေးက ကဲနေကြပြန်သေးတယ် ….။
အဲ့အချိန် ကျောရိုးက ပြီးချင်ပြီးမယ် ….။
မောင်ဘညွှန့်တုို့ ကွန်ပျူတာစသုံးချိန်က ၀င်းဒုိုး အိတ်ခ်ျပီဆုိုတာ အမြင့်ဆုံး .. မီတုို့ .. ၂၀၀၀ တုိ့တောင် မှီလုိုက်သေး …။ သင်ရင်း လုပ် .. လုပ်ရင်း သင်ပေါ့ ..။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက ထင်သလောက် မတုိုးတက်ဘူး …။ တုိုးတက်အောင် ကြံရတာပေါ့ …။
အဲ့အချိန်က ရာဟူးတုို့ .. အမ်အက်စ်အမ်တုို့ခေတ်ထနေချိန် .. ဘားဂလိစ်ဆုိုတာ လူတော်တော်များ နားမလည်တဲ့ အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ့ …။ တခြားနေရာတော့ မပြောတတ်ဘူး ..မောင်ဘညွန့်တုို့ဆီပြောပါတယ် …။
အွန်လုိုင်းမှာ အပေါင်းအသင်းရှာပြီး ချက်တင် ချက်တင်ပေါ့ …။ ညဆုို မအိမ်ကြပါဘူး .. ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အစီအရီ .. ။ ဒါတောင် … အချိန်နဲ့ အိပ်ရတာ ..သုံးမ၀သေးတဲ့သူများကြတော့လည်း အလုပ်ဆုိုပြီး ..ခုိုးသုံးပေါ့ ..။ အယ်ချုပ်ကလည်း မရှိလေတော့ .. စိတ်ကြိုက် …။
ကျနော်တုို့ဆီမှာ ည ၁၀ ကျော်မှ သုံးတဲ့သူစာရင်း သပ်သပ်ရှိတယ် …။ ခုနက ကြောင်သခင် ဦးဖုန်းတုို့ … နောက် ကုိုစောကြီး (ကဗျဆရာ ခင်ရင်မောင်) တုို့… တခြားသူတွေလည်း ရှိပါတယ် …။ အဲ့မှာ ဇာတ်လမ်းက စတာပဲ … အွန်လုိုင်းမှာ ကျူသူတုို့ရဲ့ထုံးစံအတုိုင်းပေါ့ဗျာ …။ ကုိုစောကြီး ညီတယောက်ရှိတယ် .. ဂလက်ဆစ် မင်းမင်း .. (မှန်ကြီးပေါ့ ..သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေ ..နောက်ပုိုင်း သူနဲ့ပဲ တွဲသောက်ခဲ့တာ … ခုတော့ .. အမတ်မင်းတွေရဲ့ ကုိုယ်ရံတော်လုပ်နေတယ်ကြားတယ် …သူ့အဖေက အမတ်မင်းဖြစ်နေတာကုိုး) … ။ ကုိုစောကြီးက ဦးစွာရောက်လာတာ … လာတုန်းက စက်မှုကျောင်းသားတုို့ရဲ့ထုံးစံအတုိုင်းပေါ့ဗျာ .. ဖရုိုဖရဲ …။
အဲ့အချိန်မှာ မောင်ဘညွှန့်က ရုံးမှာ မန်မုိုရီ ၅၁၂ ရှိတဲ့ တလုံးတည်းသော အကောင်းဆုံးစက်မှာ ထုိုင်ရတာ ..။ ဒီဇုိုင်းဆရာ ကမျောက်ကခြောက်ဆုိုတော့ .. ဂလုိုပဲပေါ့ …။ ကုိုစောကြီးက သူလည်း ကွန်ပျူတာအကြောင်းလေး သိချင်တော့ ဟုိုမေး ဒီစမ်းပေါ့ ..။ အဲ့မှာ မောင်ဘညွှန့်လည်း … အကွက်ပဲဆုိုပြီး … ဗမာပြည် ၀န်ကြီးဌာနတခုမှာ ပီအိတ်ခ်ျဒီယူနေတဲ့ မမကြီးတယောက်နဲ့ ချိတ်ပေးလုိုက်တယ် …။ မမကြီး မောင်ဘညွှန့်ဆီ သူ ရုရှားသွားခဲ့ဖူးတဲ့ အရုပ်ချပ်လေးတွေ ပုို့တော့ … ရုပ်ကတော့ အတော်ဆုိုးတာဗျာ …။ ဒါနဲ့ မောင်ဘညွှန့်လည်း အသာပဲဆုိုပြီး .. ကုိုစောကြီးဆီ ထုိုးထည့်ပေးလုိုက်တယ် …။
အားလားလား ..ပြောင်ချက် မြောက်ချက်ကတော့ … ညဘက်ဆုို ကုိုစောကြီး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ချက်ဘောက်လေးဖွင့် မော်နီတာစကရင်ကြီး ပိတ်ပြီး ဘောလုံးလုိုပဲဗျာ ..လုံးပြီး .ညည်းနေလုိုက်တာများ (အမှန်က စကားပြောနေတာ) …။ ဒါတောင် မောင်ဘညွှန့် တရက် အပေါ့အလေးသွားမလုို့ဆင်းတော့မှ သိတာ …။
နောက်ပုိုင်း မမကြီးက ဇာနည်ရှိလား ..ဇာနည်ရှိလားတဲ့ …။ ဒါတော့ ကုိုစောကြီးပဲ သိလိမ့်မယ်ထင်တယ် …။
ကျောရုိုးဆုိုတာကတော့ဗျာ .. ခုချိန်ထိကုို ပဟေဌိလုိုပါပဲ …။ မ,တထောင်သားတွေ နေတဲ့အရပ်လေ …။ အဲ့အချိန်က လူအစုံဆုံးအချိန် … ။ တချို့လည်း သိချင်ကြတယ် ..ဘာလဲပေါ့ … . အင်း အဲ နဲ့ပဲ ..ငြင်းခဲ့ရတာချည်းပါပဲ …။ တချို့များ သိကြမှာပါ …။ မောင်ဘညွှန့်တော့ မပြောရဲဘူး …။